03 / 03 / 2018 03 / 03 / 2018 ဂရေဟမ် 2587 Views စာ 1 မှတ်ချက် 76101 Outrider Dropship တိုက်ခိုက်မှု, 76102 Thor ရဲ့လက်နက်ရှာပုံတော်, ၇၆၁၀၃ Corvus Glaive Thresher Attack, 76104 အဆိုပါ Hulk Buster Smash-Up ကို, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown, Avengers, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
အဆိုပါ Lego Avengers: Infinity War ကိုအခြေခံပြီးအစုံလိုက်ဒီကနေ့ကိုဒီနေ့စတင်ပြီးအခု ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
ထိုအဖြစ် Marvel Cinematic Universe သည်နိဂုံးချုပ်အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည် Lego လာမည့်ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးအစုံဟာမျှော်လင့်ချက်တိုးမြှင့်ကူညီရန်ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အသစ်ခြောက် Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ Avengers အပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခြင်း - Infinity စစ်ပွဲသည်ယခုအခါကုန်ပစ္စည်းတွင်ရှိသည် shop.LEGO.com နှင့်အခြားကောင်းသောကစားစရာလက်လီအရောင်းဆိုင်များ။
ကနေမှာယူပရိတ်သတ်တွေ တရားဝင် LEGO ဝက်ဘ်ဆိုက် သီးသန့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူအပိုဆုကြေးအခမဲ့ပစ္စည်းများရရှိမည်ဖြစ်ပြီး 30525 Guardians's Ship နှစ်ခုစလုံးသည်အနိမ့်ဆုံးသုံးစွဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အမိန့်များထဲသို့ထပ်ထည့်မည်။
ဒီမှာခြောက်ယောက်ရှိတယ် အသစ်အစုံ ဒီနေ့လွှတ်တင်မှု:
76101 Outrider Dropship တိုက်ခိုက်မှု
76102 Thor ရဲ့လက်နက်ရှာပုံတော်
၇၆၁၀၃ Corvus Glaive Thresher Attack
76104 အဆိုပါ Hulk Buster Smash-Up ကို
၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown
Avengers: Infinity War ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ အစုံကနေယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← Unikitty! ယူကေတီဗီဖန်သားပြင်ကိုလာ
Lego Marvel Super Heroes 76105 ယခု Hulkbuster: Ultron Edition ကိုရရှိနိုင်သည် →
တစ်ခုမှာ "Lego Marvel Avengers: Infinity စစ်ပွဲကိုယခုရရှိနိုင်သည်"
03/03/2018 at 08:42
Argos သည် Milano စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်။ £ 20 အစား£ 70 ၏။